Black ntu oyi: nkọwa, njirimara na emebi. Chebe ihe ubi gị | Netwọk Mgbasa Ozi
Mgbe a ebili mmiri, ọ nwere ike ịbịa ụfọdụ njirimara pụrụ iche dịka ọdịnaya dị elu ma ọ bụ dị ala. Na mgbakwunye, enwere ike ọ gaghị enwe ike isonye ya na oke mmiri ozuzo. N'okwu a, anyị ga-ekwu maka nwa ntu oyi. Ọ bụ ihe ịtụnanya na-abịakwute mba anyị na ebili mmiri ugbu a yana polar mass nke banyela na peninshula.
Ọ bụrụ na ị nụtụla aha nwa ntu oyi ma ị maghị ihe ọ bụ, nọrọ ebe a na-agụ isiokwu a, n'ihi na anyị ga-agwa gị ihe niile.
1 Gịnị bụ ntu oyi?
1.1 White ntu oyi
1.2 Black ntu oyi
2 Black ntu oyi mmebi
3 Otu esi echekwa ihe ubi
Gịnị bụ ntu oyi?
Ihe mbụ anyị ga-edo anya maka ndị na-amatabeghị, bụ ihe ntu oyi bụ. Ọ bụ ihe dịka ọdịda na okpomọkụ dị n'okpuru 0 Celsius C. Mgbe temometa agbadata n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ ahụ na nrụgide nke ikuku nke anyị nwere na mbara ụwa anyị, mmiri ahụ na-adị ike ma mepụta kristal ice hexagonal nke jikọtara ọnụ iji ghọọ ntu oyi.
Mgbe ụfọdụ ọ dịghị mkpa idobe ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru 0 Celsius C ka enwee ntu oyi, mana enwere ọtụtụ ụdị anyị ga-akọwa n'okpuru.
White ntu oyi
Ọ bụ ntu oyi nke okpomọkụ dị n'okpuru 0 Celsius C na-abịaru nso ma ọ bụ hà nha okpomoku nke igirigi. Mgbe nke a mere na ọnọdụ okpomọkụ ahụ na-abịaru ebe igirigi nso, mmiri ahụ na-amalite ịgbanye. Na mkpokọta, ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị karịa 0 Celsius C, igirigi na-ada n'ụgbọ ala, osisi, ụzọ ụkwụ, wdg. Ọ bụ mgbe ahụ ka anyị nwere ike ịhụ mmiri mmiri mmiri na-etinye na ebe ndị a. Otú ọ dị, a na-akpọ ya ntu oyi na-acha ọcha mgbe, ịdị na okpomọkụ dị n'okpuru 0 Celsius C, igirigi nkịtị na-aghọ ntu oyi.
Ugbu a, anyị na-echigharịkwuru ajụjụ ajuju maka edemede a. Typedị ụdị nke abụọ bụ ntu oyi. Ọ mejupụtara ntu oyi nke ọnọdụ okpomọkụ gbadara n'okpuru 0 Celsius C mana enweghị ntu oyi a kpụrụ. Nke a bụ n'ihi na ikuku kpọrọ nkụ ọ nweghị mmiri ọ bụla. Dị ka ọ na-enweghị iru mmiri ọ bụla, ọnọdụ okpomọkụ anaghị aha ka igirigi, yabụ enweghị odide mmiri na obere obere nke usoro ntu oyi.
A na-esokarị frosts ojii a igwe gbara igwe ojii ma obu oke ogbafu di na mbara ikuku.
Black ntu oyi mmebi
I nwere ike iche n’eziokwu na ntu oyi anaghị akpata ntu oyi ka mma. Ma, a na-atụ ya ụjọ karịa ntu oyi na-acha ọcha n’ihi na ọ na-emebi ihe ọkụkụ. Ikuku ikuku nke ụdị ntu oyi a na-emegide na-awakpo ihe ndị ahụ dị n'ime ala ma na-eme ka kristal ice mepụta n'ime osisi ahụ. Mgbe akpụrụ mmiri a na-egosipụta ọdịdị, na-agbaji anụ ahụ dị n'ime osisi ahụ ma mee ka akpụkpọ ahụ dị n'ime kpọrọ nkụ, na-akpata ọnwụ nke osisi.
A maara ya dị ka ntu oyi ojii n'ihi na anya gba ọtọ nwere ike ịhụ otu osisi si ere ma na-acha oji. Ọ bụrụ na mmebi ahụ siri ike nke na ọ na-emetụta akụkụ akụkụ nke osisi ahụ, ọ ga-anwụ. Mgbe ụfọdụ ọ bụrụ na anyị chedo ha nke ọma ma ọ bụ na ntu oyi anaghị adịte aka, ha nwere ike ịlanarị.
"Ozi ọma" ahụ bụ na ọ na-agba oyi ọ na-emetụta naanị osisi nke na-apụ apụ. Nke ahụ bụ, mgbe ihe ọhụụ a mere, ọ na-awakpo osisi ndị ahụ ahịhịa ha na-arụ ọrụ. Osisi na-acho acho acho imebi ihe ndia n'ihi na o nweghi ihe ha bula.
A pụghị ịtụ anya frosts ndị a n'oge dị anya, yabụ ịkwadebe maka ha siri ike nke ukwuu. Naanị ihe ị ga - eme bụ ịnwa ichebe ihe ọkụkụ gị na nsogbu ọ nwere ike ịkpatara gị.
Ebe ọ bụ na ahịhịa ndị nọ na ahịhịa na-arụ ọrụ kacha emebi, anyị kwesịrị ime ihe iji chebe ha pụọ ​​na mmebi. Maka osisi ndị ahụ dị n’ite ma ọ bụ na anyị nwere n’ubi ahụ, ọ dị mfe ichebe ha. Just ga-etinye ha n'ime ụlọ ahụ ma debe ha n'ebe na-egbuke egbuke. Ọ bụrụ na anyị etinye ha na ihe owuwu ụzọ mbata nke mgbidi ahụ, a ga-echebe ha.
Ilebara osisi nke na-anọghị n'ite bụ ihe kachasị mgbagwoju anya. Otú ọ dị, anyị ga-enye ebe a ụfọdụ ndụmọdụ iji gbochie ntu oyi ojii ibibi osisi anyị.
Ọ bụrụ na anyị nwere osisi ma ọ bụ shrub n'ubi a kụrụ n'èzí, anyị nwere ike iji ihe mkpuchi kpochie ala. Nke a na-enye ohere ịmepụta ụdị ihe mgbochi na-egbochi oyi ịbanye na ala. N'ụzọ dị otú a, anyị ga-egbochi mmiri dị na pores nke ahịhịa ka ọ ghara ịjụ oyi ma bibie onwe ya n'ime.
Podemos tinye usoro ogbugba mmiri n'ubi nke na-agba mmiri ịkụ osisi ahụ. N'ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ọnọdụ okpomọkụ dị n'okpuru 0 Celsius C, anyị ga-enweta oyi akwa ice iji mepụta n'elu anụ ahụ ihe ọkụkụ ma rụọ ọrụ dị ka mkpuchi. Ice na-echebe anụ ahụ osisi.
Zere imebiga ihe ókè na ala ubi n’oge ọnwa oyi. A frosts itie ke ini etuep ini. Ọ bụrụ na anyị akọghị ịkọ ihe, anyị ga-ahapụ ụsọ mmiri siri ike ịpụta n'elu ala nke na-ekpuchi ala mmiri site na oyi.
Nwere ike ebe Fans ịkwaga ikuku na ọ bụghị ezigbo ọdịda nke okpomọkụ anaghị akpata.
Usedzọ kachasị eji eme ihe bụ nchedo ihe ubi na plastik ma obu akpa. Ihe kachasị mma bụ iji plastik ma ọ bụ sacks kpuchie osisi ndị ahụ na ịwụ mmiri n'ime. A na-eme nke a n’ihi na mmiri na-efunahụ ma nwetakwu ọkụ n’ụzọ nwayọ nwayọ karịa ikuku. Nke a bụ otu o si arụ ọrụ dị ka ihe na-achịkwa ọkụ na mpaghara micro a, ebe ọ bụ na mgbe mmiri dị na plastik, ọ ga-ewepụta okpomọkụ latent.
Enwere m olileanya na site na ndụmọdụ ndị a ị nwere ike ịgafe ntu oyi a na-enweghị mmetụta ọ bụla.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Black ntu oyi
Mmiri ozuzo nke azụ na frogs